ဆိတ်သားကင် | Wutyee Food House
« အာလူး မီးကင်
Food မဂ္ဂဇင်းမှ Wutyee Food House ပုံရိပ်များ »
December 28, 2011 by chowutyee ဆိတ်သားကင်
ဆိတ်သားကို သံတံစို့ဖြင့် သီပြီ ကင်ခြင်းသည် ရှေးအကျဆုံး ကင်နည်းတမျိုးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် နာရီကြာကြာနှပ်ပြီ ကင်တဲ့ ဆိတ်သားအရသာက ချိုစိမ့်ပြီ မွှေးနေပါတယ်။ ထုိ့ပြင် ကြက်သွန်နီ၊ ငရုတ်ပွစိမ်း အရသာများ၏ လတ်ဆတ်တဲ့ အရသာသစ်တမျိုးကိုပါ ပေါင်းစပ် ရရှိမှာပါ။ အရောင်စုံမို့ မြင်ရုံနဲ့ စားချင်စဖွယ်ကောင်းသော ဆိတ်သားကင်လေးကို လုပ်စားကြည့်ရအောင်…
ဆိတ်သား [mutton] ♦ ၁၅ကျပ်သား (၁လက်မအရွယ် အတုံးလတ်များ တုံးပေးပါ)
ကြက်သွန်နီ [onion] ♦ ၂လုံး (၄စိပ်စိပ်ထားပါ)
ငရုတ်ပွစိမ်း [green pepper] ♦ ၂ခု (အစေ့ထုတ် ၈စိပ်စိပ်ထားပါ)
ခရမ်းချဉ်သီး [tomato] ♦ ၂လုံး (အစေ့ထုတ် ၈စိပ်စိပ်ထားပါ) ဆိတ်သား နှပ်ထားရန်ပါဝင်ပစ္စည်းများ [Marinate Ingredients]
လီမွန်ရည် [lemon juice] ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
ငရုတ်ကောင်းမှန်ု့ [black pepper]♦ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
ကြက်သွန်နီ [onion] ♦ ၁လုံး (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပါ)
ကြက်သွန်ဖြူ [garlic] ♦ ၃မွှာ (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပါ)
ကလဝေရွက် [bay leave] ♦၂ရွက်
ဆိတ်သားကင်ပေါ်မှ သုတ်ရန်ဆော့ရည် [Sauce Recipe]
လီမွန်ရည် [lemon juice] ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
ကင်နည်း [Grill Recipe]
၁။ အရင်ဆုံး ဆိတ်သားများကို နှပ်ရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သော (လီမွန်ရည်၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ သံလွင်ဆီ၊ ကလဝေရွက်)တို့ဖြင့် သမအောင် နုယ်ထားလိုက်ပါ။
၂။ ပြီလျှင် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ထည့်ပြီ အနည်းဆုံး ၄နာရီခန့် နှပ်ထားပေးပါ။
၃။ (ငရုတ်ပွစိမ်း၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဆိတ်သား၊ ကြက်သွန်နီ )များကို သံတံစို့များဖြင့် ပုံတွင် ပါသည့်အတိုင်း ရောင်စုံလေးများ သီထားပေးပါ။
၄။ ပြီနောက် ဆိတ်သားကင်ပေါ်မှ သုတ်ရန်ဆော့ရည်အတွက် (ထောပတ်၊ လီမွန်ရည်) တို့ကို ခွက်တစ်ခုထဲ ရောမွှေလိုက်ပါ။
၅။ ကင်မည်ဆိုလျှင် မီးကင်ပြားကို ဆီအရင်သုတ်ထားပေးပါ။ မီးသွေး (သို့) ဂက်(စ်) ကြိုက်ရာဖြင့် ကင်နိုင်ပါသည်။
၆။ ဆိတ်သားကင်ကို ကင်နေစဉ် အပေါ်မှ ဆော့ရည်များ သုတ်ပေးပြီ တဖက်ကို ၃မိနစ်ခန့် ၁၂မိနစ်ခန့် မီးအသင့်တင့်ဖြင့်ကင်ပေးပါ။
ရ။ ဆိတ်သားကင်ရပြီဆိုလျှင် အရသာရှိစွာ စားသုံးနိုင်ပါပြီ…
Tips: ကင်သည့် သံတံစို့သည် အလုံးထက် အပြားက ပိုကင်လို့ ကျယ်ပြန့်ပြီ ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
on December 28, 2011 at 9:54 pm | Reply Cho Wut Hmone
look so yummy…. wanna try
on December 30, 2011 at 4:53 pm | Reply chowutyee
Plz try hmone gyi!!🙂
on December 30, 2011 at 4:53 pm chowutyee
Plz try hmone gyi!🙂
on December 29, 2011 at 1:32 pm | Reply မြတ်
ညီမရေ ဆိတ်သားဆိုဘယ်လိုဘဲ စားစား အရမ်းကြိုက်တယ် ၊ လျှပ်စစ်မီးနဲ့ ကော ကင်လို့ ရလားဟင်၊ ၀က်ခေါက်ကင်လေးလည်း ပို့ပေးပါအုံးနော်၊ အခုတော့ လုပ်ပြီးသားတွေဘဲ အ၀စားသွားပြီးနော်။
on December 30, 2011 at 4:52 pm | Reply chowutyee
လျှပ်စစ်မီးနဲ့ ကင်လို့ရတယ် မမြတ်။ ၀တ်ရည်လည်း လျှပ်စစ်မီးနဲ့ပဲ ကင်ထားတာ.. ဟုတ်ကဲ့ အားရင် တင်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်.. ကျေးဇူးပါ
on December 30, 2011 at 2:05 pm | Reply wwmoe
ကင်မစားဖြစ်တာကြာပြီ ငယ်ဘဝအမှတ်တရကင်စားရတဲ့ အတွက်
on December 30, 2011 at 4:50 pm | Reply chowutyee
on December 30, 2011 at 4:49 pm | Reply ခင်ယမုံ
ဆိတ်သားကင်ကို သိပ်မစားဖြစ်ပေမယ့် ညီမလုပ်ထားတွေလေးက အရမ်းကိုစားလို့ကောင်းမှာပဲ..
on January 18, 2012 at 1:14 am | Reply chowutyee
on December 31, 2011 at 7:01 am | Reply ကျော်သန်းထက်
lemon juice ဆိုတာ ရှေက်ရည်ကိုဆိုလိုတာလား ဖျော်ရည်ရောင်းတဲ့ဆိုင်က juice ကိုဆိုလိုတာလားအမ
on January 17, 2012 at 10:18 am | Reply chowutyee
လီမွန်ရည်ကို ပြောတာပါ။ မရှိရင် သံပရာရည်ကို အစားထိုးသုံးလို့ရပါတယ်